Mitondra ny fampiasana bisikileta amin’ny haavony vaovao ny ‘Bike Man’ ao Trinidad & Tobago · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Jona 2019 5:03 GMT
Pikatsarin'ilay lahatsarin'ny ‘Bika Man’ ao Trinidad, izay nozaraina imbetsaka tao amin'ny Facebook.
Firenena feno havoana i Trinite sy Tobago — ara-bakiteny sy amin'ny hevitra ambadika
Ao anatin'ireo fankalazana ny Karnavaly isantaona ao amin'ny firenena ny moko jumbies-ny, ireny endrik'olona amin'ny fomba nentim-paharazan'i Afrika Andrefana ireny. Araka ny lovantsofina, ahafahan'ireo jumbies mijery tsara mba hanavahany ny ratsy ary hiaro ireo tsy manan-tsiny ny haavon'ireo tongotrahazo ireo – matetika eo amin'ny 3,5 sy 4,5 metatra eo -. Matetika manao zipo lavabe na pataloha malalaka be ireo mpandeha amin'ny tongotrahazo mba hahatonga azy ireo hanana endrika olona goavambe – fa ny tantara vao haingana tao Trinite sy Tobago dia tsy liana akory amin'ny fanafenana ireo fitaovana mahatonga azy ho afaka handrahona ireo olombelona.
Mifankahafantara amin'ny “Bike Man”-n'i Trinite sy Tobago, izay mampientanentana any anatin'ny tambajotra sosialy. Jazeel Joseph no anarany, mpaningina, 34 taona izay manana traikefa 21 taona tamin'ny fandehanana amin'ny tongotrahazo toy ny moko jumbie. Miresaka amiko amin'ny finday, milaza izy fa nahalasa avo kokoa noho ireo hafa mpandeha amin'ny tongotrahazo ao amin'ny firenena, amin'ny haavo 4 ka hatramin'ny 5 metatra.
Sasany amin'ireo bisikiletin'i Jahzeel “Bike Man” Joseph. Sary natolotr'i Joseph, fampiasàna nahazoana alàlana.
Taorian'ny nahitany mpivady nitaingina bisikileta tandem tao an-tanàna no teraka ny hevitra hanamboatra ireny bisikileta avo be ireny. Hoy izy tamin'ny tenany, “Jahzeel ah, afaka manamboatra an'io ianao!” Nanao sary izy ary “hampiakatra izany kely fotsiny”. Manana bisikilety maro izy — izay ny telo novinainy sy namboariny, manomboka 2 ka hatramin'ny 4 metatra, 22 sentimetratra. Hevero toy ny moko jumbie mandeha kodiarana izany! [Fanamarihana: misy fampitandremana ara-teny ho an'ilay lahatsary.]
Avy any Diego Martin ilay “mpitaingina bisikileta goavana indrindra erantany”, ambanivohitra iray any Avaratra Andrefan'i Trinidad. Rehefa nanontany azy aho hoe iza no nahatonga azy hamorona ireny bisikileta hafakely ireny, namaly izy hoe: “Tiako ny ho hafa amin'ny rehetra.” Fa mbola misy zavatra ankoatra izany. Mihevitra izy fa fomba iray fankaherezana ireo tanora mba hahafantatra ny zavatra mampiavaka azy ireo ny mandeha an-kodiarana – ary indrindra ireny bisikileta tsy dia fahita ireny.
Manazava izy fa “Tsy ny heloka bevava irery ihany no fomba fiainana,” Tsy voatery ho mpanao ratsy ianao vao ho fantatry ny olona.” Rehefa mankany aminy ireo “tovolahy” ao an-tanànany, mianatra ny mitondra ireny bisikileta mahagaga ireny izy ireo, ary ao anatin'izany, maminavina ireo fahafahana tsy misy fetra ho an'ny fiainan'izy ireo. Mandehandeha manerana ny firenena i Joseph, manintona ny sain'ireo vondrom-piarahamonina andalovany:
Misy fomba fiteny Tribagoniana miteny hoe: ho eny amin'ny “avo”. Hevitra sarotra dia sarotra izay manondro olona iray manangana zavatra izany – matetika amin'ny fomba mampihomehy sy mahagaga – saingy manana halalina ifotony izay manalavitra ny olona amin'ny toeram-ponenany ary mampisaina azy ireo amin'ny fomba tsy mbola noeritreretiny mihitsy taloha. Misy singa iray mampitolagaga sy fahatalanjonana izay manome fitsaharana ho an'ny olona ka mahatonga azy ireo hanozongozona ny lohany noho ny fahagagana. Antsoin'i Joseph hoe “jaw-droppers” ireo bisikileta ireo — ary tena izany tokoa.
Mba hitanisana ilay mpijery ao anatin'ilay lahatsary faharoa:
Eny tokoa! Ilay lehilahy mitaingina [tsy] mampiasa tanana, eny […] 4 metatra an'habakabaka … afaka mahazo [azy] ve ianao?
Mba hanitarana ny sahan'asany na izany aza, mila tohana amin'ny endrika fiantohana ho an'ilay hetsika santatra ataony ho fanentanana ny tanora i Joseph, ary mila fanomezana bisikileta sy sombim-pitaovana efa nampiasaina. Tao anatin'ny resaka Facebook iray, nisy resa-be nikasika ny fahafantarana raha toa ka ho voafidy ho ao anatin'ny Guinness World Records ilay “Bike Man”, fa tsy ampy eo amin'ny 3 metatra eo. Na izany aza, an-tampon'ny toe-javatra i Joseph – efa niantso ireo tomponandraikitry ny Guinness World Records izy, izay nandefa taminy ireo torolalana mifanaraka amin'izany. Mieritreritra ny hamorona endrika vaovao izay iasany amin'izao fotoana izao izy ary hiady ny faran-tampony amin'ny bisikileta lehibe indrindra erantany.
Tsy misy isalasalana fa efa ampy ny valim-pizaràn'ireo “haavon”i Joseph – raha ny marina, naneho ny fahalianany amin'ny fahitany ilay “Bike Man” ny vondrona ” #1000 Mokos stilt-walking “. Tsy olana izany lesy ah!” hoy izy mantsy ahy. ” Afaka hidina eny aho ary haka sary miaraka amin'ireo moko jumbie.” Ankehitriny, ho “haavo tena izy” izany!
6 andro izayTrinite sy Tobago